मतपत्रमा कसको चुनाव चिह्न कति नम्बरमा ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
मतपत्रमा कसको चुनाव चिह्न कति नम्बरमा ?
चैत्र ६, २०७३ ०९:०१ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता ६ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदमा भएका २६ राजनीतिक दलले पुरानै चुनाव चिह्न पाउने भएका छन् । साथै २६ दलले संविधानसभा २०७० को चुनावमा समानुपातिक तर्फ पाएको मतका आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिह्नको क्रम निर्धारण गरिएको छ ।
संसदका ३० दल मध्ये राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलेर राप्रपा बनेको छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेको छ ।